असल बानीको विकास कसरी गर्ने? :: आदर्श विक्रम सिंह :: Setopati
असल बानीको विकास कसरी गर्ने?
कसैको चुरोट तान्ने लत हुन्छ, कसैको चिया पिउने, कसैको पढ्ने, कसैको नपढ्ने, कोही बोल्ने, कोही नबोल्ने, कोही काम गर्ने, कोही कुरा गर्ने। यिनी सबै आदतका उपज हुन। हाम्रा आदत निर्माण हुनुअघि हाम्रो मनोविज्ञान बदलिन्छ। मनोविज्ञानले विश्वासको ब्लुप्रिन्ट तयार गर्छ। अनि हामी हाम्रा राम्रा हुन् या नराम्रा आदतका नोकर बन्न पुग्छौं।
अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त दैनिकीले मावन जीवनमा कस्तो महासंकट आउन सक्छ भन्ने उदाहरण पहिलो लकडाउन हो। कोरोना महामारीको जस्तो समय मानिसहरुले कहिल्यै देखेका र भोगेका थिएनन्। सबै नयाँ दैनिकीमा प्रवेश गर्दै थिए। एकातिर मनभरि संक्रमण भएर मरिने डर अर्कोतिर नयाँ दैनिकी मोबाइलको लतमा फस्दै थियो। सुरु-सुरुमा नयाँ दैनिकीसँग कोरोना संक्रमणरहित भएर कसरी मिलेर बस्ने भन्ने ज्ञानगुनका कुरा विशेषज्ञका अनुसार पालना पनि गरे। तर, केही समयछि सवाल सबैको एउटै भयो। कहिलेसम्म?
हो, तपाईंले हिरोको रोल निभाउनुपर्छ। अझ तपाईंलाई थाहा होला, जटिल रोल जो-कोहीलाई दिइँदैन। यदि तपाईं आफ्नो कथामा जटिल भूमिका निभाइरहनु भएको छ भने सम्झनुस् तपाईंको जिन्दगीको कथा ब्लकबस्टर हुनेवाला छ। मेहनतको फल प्रकृतिले नै तपाईंलाई दिने हो। कर्म गरेकोले फल कसरी नपाउन सक्छ?
(लेखक उत्प्रेरक वक्ता हुन्।)
प्रकाशित मिति: आइतबार, कात्तिक २८, २०७८, ००:४७:००